NgaphakathiSales: Xhumana, Gamify, Bikezela futhi ubone ngeso lengqondo Ukuthengisa
Xhumana, Gamify, Bikezela futhi ubone ngeso lengqondo Ukuthengisa
NgoLwesine, ngo-Okthoba 31, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 18, 2021 Douglas Karr
NgaphakathiSales.com's PowerSuite ™ is a ipulatifomu yokuphatha impendulo enikeza amaqembu okuthengisa ngakho konke akudingayo ukwenza ngcono inqubo yokuthengisa okukude futhi abeke ukuthengisa kudrive. Imikhiqizo yesoftware ye-InsideSales.com yenzelwe ukuphendula imikhondo nemibuzo ngokushesha nangokuphelele. Lokhu kwenza amakhasimende akhuphule ngendlela emangalisayo amazinga wokuxhumana neziqu, futhi aqhube ukuthengisa.
Imikhiqizo yeSalesforce CRM
I-PowerDialer ™ ye-Salesforce - Isidayeli esinamandla kakhulu emakethe esakhelwe ngqo ukusebenza ku-Salesforce CRM. Idinga i-Salesforce CRM.
Chofoza ukuze ubize i-Salesforce - Chofoza-Ukuze-Call ™ for Salesforce kuletha ucwaningo onqenqemeni nobuchwepheshe yesikhulumi InsideSales.com kuya Salesforce CRM.
I-LocalPresence ™ ye-Salesforce - Okuwukuphela kwenethiwekhi kazwelonke eyenzelwe amaqembu wokuthengisa nokumaketha ukuthengisa ngempumelelo nokumaketha endaweni ngefoni, iwebhu ne-imeyili.
I-PowerStandings ™ ye-Salesforce - I-PowerStandings ™ iletha isici sokuthakazelisa se-gamification kwi-PowerDialer ™ ye-Salesforce, futhi ithuthukisa kakhulu ukusebenza kwe-rep.
I-PowerText ™ yeSalesforce - I-PowerText ™ inikeza izikhumbuzo ze-aphoyintimenti, ukuthumela imiyalezo okukodwa, ukulandelela, nokubika koxhumana nabo beselula konke ngaphakathi kwe-SaaS CRM ehamba phambili, salesforce.com.
Ipulatifomu Ye-Lead Management Platform - Ipulatifomu yokuphatha yokuhola edingeka kakhulu equkethe wonke amathuluzi okuphendula okuholayo okudingeka uxhumane nawo, ufaneleke futhi uvale ukuthengisa okuningi.
I-PowerDialer ™ - Isidayeli esinamandla kakhulu emakethe. Idizayinelwe ukuthengiswa kwe-B2B kanye ne-B2C eyinkimbinkimbi. I-PowerDialer™ ayigcini nje ngokulungiselela isikhathi socingo, ithuthukisa imiphumela.
I-PowerInbound ™ - Onke amathuluzi ocingo we-PowerInbound ™ wesikhungo sezingcingo esingena ngaphakathi. Ihlangana ne-PowerDialer ™ yokuxuba okungenayo / okuphumayo kocingo.
I-LocalPresence ™ yi-InsideSales.com - Ihlanganiswe ngokuphelele ne-PowerDialer ™, iLocalPresence ™ inika izinkampani ubukhona bebhizinisi lendawo ezimakethe ezingaphezu kuka-280 e-United States.
I-Loop Yempendulo Nge-ELF ™ - Uhlelo lwethu lwe-Response Loop lusebenzisa “i-Electronic Labour Force™” eyakhelwe ngaphakathi ukuze kukhuliswe ukuhola okuhlakaniphile nokuphathwa kokuhamba komsebenzi. Ithumela ama-imeyili, amafeksi, iqondisa kabusha imikhondo, icupha ucingo, nokuningi.
Ukuqopha nokuqapha - Qopha kanye / noma uqaphe noma iyiphi ikholi. Ilungele ukuqeqeshwa kabusha kanye nokuqinisekiswa kwekhwalithi.
I-JabberDog ™ - Ukudayela okuzenzakalelayo komyalezo wezwi okusakazwa ngezinketho zokuthumela i-imeyili ngokuzenzakalela noma ukuyisa kumenzeli obukhoma.
Tags: umdayisiukuthengisa kwangaphakathiinglobalwebukuhola ukukhulisaukubakhonaisidayeli samandlaamandlayokuqapha yokuthengisaukurekhoda kokuthengisaimpendulo yokuthengisasalesforceabasebenzi be-crmukuphathwa kokuhamba komsebenzi
I-BrightTag: Ipulatifomu Yokuphathwa Kwethegi Yamabhizinisi